Mayelana NATHI - I-Danyang NQ Sports And Fitness Co., Ltd.
IDanyang NQ Sports and Fitness Co., Ltd. igxile ekukhiqizeni imikhiqizo yobungcweti ye-latex nemikhiqizo yokuqina. With kuka 10years isipiliyoni ukukhiqizwa embonini yethu. Imikhiqizo yethu eyinhloko kubandakanya i-latex resistance loop band ne-yoga band, i-latex tubing expander njll singenza imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso ngokusho kwesicelo. UMNQOPHISO Sinaka kakhulu ikhwalithi yomkhiqizo futhi "Ikhwalithi iyimpilo yefektri yethu". Beka ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa okuhle, phakathi nesevisi yokuthengisa njengenjini yokukhula kwemali engenayo, Nikeza inzuzo nenzuzo yokuncintisana yamakhasimende. Sihlala sikhula namakhasimende ndawonye. UMBONO Ukuze ube ngumholi owaziwayo kumkhiqizi we-yoga nemikhiqizo yokuqina kanye nokuthumela kwelinye izwe eminyakeni emi-3-5 ezayo. Sifeza lokhu ngokunika abasebenzi amandla okuba babe ngabangcono kakhulu futhi babe nokukhuthaza amaqembu asebenza kahle. Ikhwalithi yomkhiqizo kuqalaAmakhasimende aqala ukucabangela Umsebenzi Wethimba Lensizakalo Umsebenzi Wokuzibophezela Kokwenza Okuhle Kumphakathi.
IDanyang NQ Sports and Fitness Co., Ltd.
Ububanzi bebhizinisi: I-R & D kanye nokukhiqizwa kwemishini yokufaneleka nezinsiza, imishini yokuvuselela nezesekeli.
I-Latex Tension Belt
Uma sibheke phambili esikhathini esizayo, sizohlala silandela umoya webhizinisi we "ikhwalithi yokuqala, ubuqotho bokwenza ibhizinisi, ukubekezela, ubuhle" ukunikeza amakhasimende ethu ikhwalithi ephezulu nemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Ukuhlangabezana nezidingo zemibuthano yethu yezemidlalo nokwenza iminikelo emikhulu kunhloso yezemidlalo kazwelonke. Ngekhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu, umqondo womsebenzi wenhliziyo yonke futhi ofike ngesikhathi, ikhwalithi yebhizinisi ethembekile nethembekile nokuziphatha okuhle, sizuze ukwethenjwa nokudunyiswa kwamakhasimende ethu. Ukusebenza kwethu nokuxhasa futhi sikhuthaza amakhasimende ethu ukuthi akhe imbangela yezemidlalo ihlangene kuze kube phakade. Sizozinikela ngentshiseko kwezemidlalo futhi sakhe ikusasa kanye nawe.
Inkampani yethu igxile ekukhiqizweni nasekusebenzeni kwemikhiqizo efana ne-thruster, ukubamba, imishini yokuqina, ibhande lokungezwani kwe-latex, indandatho ye-latex, ithubhu ye-latex, njll, ngohlelo oluphelele nolwesayensi lokuphathwa kwekhwalithi.